Iiplatform ezi-6 ezigqwesileyo zoShishino kumashishini amancinci- ezahlukeneyo
Iiplatifomu ze-E-yorhwebo eziPhezulu ze-E-commerce yamashishini amancinci
EyoMdumba 06, 2017 by UBernadine Racoma, Iimbono zizonke:
Abanini bamashishini abancinci namhlanje banethuba elilula lokuqhuba amashishini abo ngenxa yokuhambela phambili kubuchwepheshe. Nokuba baneemfuno ezahlukeneyo, ukulawula nokulungisa ishishini kukhawuleze kwaye kusebenze ngakumbi. Iinkqubo ezahlukeneyo ze-e-commerce ziyafumaneka, ezinokulungelelaniswa kwiimveliso kunye nohlahlo-lwabiwo mali lwabanini bamashishini.
Ngaphambi kokuba siqhubeke, masiqale ngokuchonga ukuba umnini weshishini unokufuna ntoni. Xa uqala ukukhangela kumaqonga e-commerce, uya kudibana nale migaqo: isoftware yenqanawa yokuthenga kunye nesoftware ye-e. Ezi zibini ziyahlangana kodwa zinomahluko mncinci. Ke ngoko, kulula kuwe ukuba uthathe isigqibo sokuba yeyiphi software oyifunayo xa usazi ukuba zithini iimfuno zeshishini lakho.
Iqonga elipheleleyo lwe-e-commerce elinokuba nayo yonke into, kubandakanya uyilo lwewebhu kunye nokusingathwa kwewebhusayithi, ukuseta indawo yakho yokugcina ekhompyutheni kunye nokulungisa iintlawulo kunye nokubonelela ngokhuseleko kwi-Intanethi kunye nezixhobo kunye nomthengisi. Isoftware ye-e-commerce ye-in-commerce ingadityaniswa kwiwebhusayithi esele ikho.
Ukuba kuphela emva kokulungiswa kwentlawulo kunye noluhlu lweemveliso kunye neenkonzo zewebhusayithi yakho esele ikhona, kungcono ukufumana isoftware yenqwelo yokuthenga. Ingaba sisongezo okanye i-plugin yewebhusayithi, ngesimo esithile esivumelekileyo, ngokuxhomekeke kuyilo lwewebhusayithi kunye nokukwazi kwesoftware.
Ngoku ukuba unoluvo ngokubanzi malunga nento onokuyidinga, Nazi ezinye ze-e-commerce software ezifanelekileyo ukukhetha kuzo.
Le nkqubo ithandwa kakhulu ngenxa yeempawu zayo ezininzi, kubandakanya ukwazisa, ukuqhuba nokulawula ishishini lakho le-e-commerce. Yakhelwe ngaphakathi kwiinkqubo ezinjengokusebenza ngasemva kokuphela, ulawulo lweempahla, umakhi wewebhusayithi kunye nokusingathwa kwewebhu. Ikwabandakanya nolawulo lobudlelwane babathengi okanye i-CRM kunye nezixhobo zentengiso. I-Shopify iyasebenziseka kwaye kulula kakhulu ukuyifaka. Izicwangciso zokurhuma ezininzi zinikezelwa kwaye inkxaso yabathengi iyafumaneka nge-24/7.
Ukuba unayo umphuhlisi wewebhu ebhodini, iMagento sisicelo esomeleleyo se-e-commerce esichazayo nesinokwenzeka ukuze ukwazi ukuyiguqula ngokusekelwe kwiimfuno zakho zangoku. Ikuvumela ukuba uphathe iivenkile ezininzi ze-intanethi ngeMagento Dashboard enye. Iza ngenguqulelo yasimahla, yemithombo evulekileyo eneendleko ezandisiweyo kunye neeplagi. Ukuba unemali yokutyala imali, inkampani ibonelela ngeMagento Enterprise ekunika ukufikelela kuyo yonke uyilo lwayo, ukumiliselwa kweserver kunye nezisombululo ezenziwe ngokwezifiso kunye nokunxibelelanisa nabaphuhlisi bayo kunye namaqabane ukukunika yonke inkxaso oyifunayo.
Ukuba unayo iwebhusayithi yeWordPress, iWoo Commerce yenye yezona software ezilungileyo kakhulu zeenqanawa zokuthenga ongazisebenzisa. Iza kwiinguqulelo ezihlawulelwayo nezasimahla kwaye kulula kakhulu ukuzidibanisa kwiwebhusayithi yakho esele uyiguqulela kwisitolo esenziwe ngentloko. Ungafikelela kwimixholo eyahlukeneyo kunye nezandiso ukwenza indawo evumelana neemveliso / iinkonzo kunye nezinto ozithandayo. Akukho sidingo sokwenza i-akhawunti yomthengisi njengoko inokudityaniswa ngokuthe ngqo ne-PayPal, ngenxa yoko kulula ukwenza inkqubo kunye nokufumana iintlawulo ngaphandle kokuhlawula iifizi zebhanki.
I-squarespace yinkqubo efikelelekayo kakhulu kodwa egcwele urhwebo lwe-e. Inikezela ngeetemplate ezahlukeneyo zewebhusayithi yakho nokuba awuyazi indlela yokubonisa ikhowudi ukuze ube nendawo yokubamba imehlo. Ikuvumela ukuba ulayishe inani elingenamkhawulo lezinto, ukuthengisa iimveliso zedijithali kunye nezomzimba, ukuvelisa ikhuphoni, ukumisela iindleko kunye neerhafu zokuthengisa, kunye nokwenza uluhlu lwe-imeyile yabathengi. Oku kuhle kumnini weshishini lokuthengisa izindlu nomhlaba ongadingi ivenkile ezinombane ezivenkileni. Ayisiyo eyomeleleyo kwisebe le-SEO okanye kwisebe lobudlelwane babathengi kodwa ujonge isoftware yokukunceda uthengise eyakho iinkonzo kwaye iimveliso, yile yona. Uncedo olukhulu kulawulo lweempahla.
I-Weebly inezinto ezibanzi ze-e-commerce kwaye ikunika inketho yokwenza ivenkile ye-intanethi nazo zonke izinto ozifunayo. Inomdla kakhulu kwaye yenye yezona nkqubo zisebenzayo ze-e-yorhwebo onokuzifumana. Unokongeza iimveliso ezininzi kwaye ukonwabele ukuxhamla ngokuba nenketho enkulu yenqola. I-Weebly inokudityaniswa ngokulula kwiiprosesa ezahlukeneyo zokuhlawula njenge Authorize.net, isikwere, PayPal kunye ne-Stripe.
Akunyanzelekanga ukuba ube yi-teknoloji ye-tech ukuba usebenzisa i-Wix njengoko iyile "umakhi kwaye ulahla" umakhi wewebhusayithi. Emva kokukhetha umxholo wewebhusayithi, unokukhetha ngokulula apho ufuna ukongeza umxholo onjengombhalo, ii-slideshows kunye nemifanekiso. Ukuba iimfuno zakho ze-e-commerce azikho ngaphambili, i-Wix sisixhobo esihle sokusebenzisa.
Nokuba yeyiphi na i-e-commerce yeqonga olikhethayo, qiniseka ukuba iyahambelana neemfuno zakho zangoku nezexesha elizayo. Ngamaxesha onke kungcono ukhethe enye enokuchaphazeleka ukuze uyilungelelanise njengoko ikhula ishishini elincinci.
UBernadine Racoma ngumbhali ongumxholo ophezulu ku Ukuguqulelwa kwemini, inkampani yokuguqula iinkonzo zabantu. Emva kokuzinza kwakhe njengomphathiswa waseburhulumenteni, ulandele ngomdla umnqweno wakhe wokubhala kunye nophando. Njengombongo wakhe, ubhala yonke into ngokusuka entliziyweni, kwaye uphatha into nganye ebhaliweyo ngumsebenzi wobugcisa. Uyazithanda izinja!
Iqonga lezorhwebo zixhobo eziluncedo kubanini bamashishini ekutshintsheni amashishini abo kwiivenkile ezisebenza kakuhle kwi-Intanethi
UBernadine Racoma Februwari 6, 2017
Olu ngeno yafakwa kwi Ishishini lokuthengisa izindlu noqhotyosho Iiplatifomu zorhwebo, Isoftware ye-E-Commerce, Abanini bamashishini abancinci, Amashishini amancinci. Bookmark le Permalink.
Oktobha 3, 2018 Iitekhnoloji kunye neendlela eziNgqinayo ukuba zoTshintsho olwamkelweyo kwiNtengiso yeReEstate Njengawo nawuphi na omnye umzi-mveliso, ishishini lokuthengisa izindlu nomhlaba lithe lavela okuninzi kwiminyaka elishumi edlulileyo. Kubekho ukusetyenziswa okuthe kratya kokusebenzisa ubuchwepheshe obutsha kunye nobungcono obuqulathe umkhwa omtsha wentengiso yokuthengiswa kwezindlu. Kukho iibhlog ezintsha kunye noluhlu lokwenza uluhlu olukhulu lwempembelelo kwiingqondo zabantu kunye nakwiimarike. Iiarhente zeearhente zezindlu zibafumana lula ukuthengisa impahla yabo ngokukhawuleza, kwaye kwangaxeshanye, kuyilwe ngcono […] exhonyiweyo Ishishini lokuthengisa izindlu
Ngamana 13, 2017 Izizathu ezi-5 zabaQeshi kufuneka batyale iiNkqubo zoQeqesho lwaBasebenzi Enye yeempahla ezinkulu zeshishini ngalinye ngabasebenzi bayo, yiyo loo nto ke kufuneka utyalomali kwiinkqubo zoqeqesho lwabasebenzi lubalulekile. Ukuphumeza iinkqubo zoqeqesho ezisebenzayo, nokuba ziyilungiselelo lendawo yokufundela okanye izifundo zoqeqesho kwi-Intanethi, kukhokelela kwizibonelelo ezininzi kubasebenzi abathile nakwinkampani. Inkqubo ephumelelayo yoqeqesho iyakwazi ukuphucula izakhono zabasebenzi, ezinje ngokucinga kakhulu, ukusombulula iingxaki, unxibelelwano, ukusebenzisana, ubuchule kunye […] exhonyiweyo Ishishini lokuthengisa izindlu